LIFESTYLE Archives - VPS - MCKZONE
အလှူမှာ ညတရားပွဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်း မဏ္ဍပ်ရှေ့ထွက်ထိုင်နေမိချိန်လေး …. ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကျွန်တော့်က ကားကိုဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့အနားသွားမှပဲ ဆော့နေကြတာမဟုတ်ဘူးဗျ…. ဘုန်းကြီးကားကို သူတို့အကျီင်္ လေးနဲ့ ဖုန်တွေသုတ်ပေးနေတာပဲ။ ခုအချိန်မှာ လူကြီးတွေဘယ်လိုစိတ်ဓါတ်တွေပဲရှိနေကြပါစေ ….. နောင်တစ်ချိန်လူကြီးဖြစ်လာကြမဲ့ ကျွန်တော့်တို့ရွာက ကလေးလေးတွေရဲ့ ခုလိုစိတ်ဓါတ်လေးတွေတွေ့ရ‌ပြန်တော့လဲ ကြည်နှူးမိရပြန်ပါတယ်။ ကလေးလေးတွေရဲ့ စိတ်ထားလေးတွေ ခုလိုလေးဖြစ်ပေါ်လာရတာကလဲ ကျွန်တော်တို့ရွာလေးမှာရှိတဲ့ဓမ္မစကူးလ်သင်တန်းလေးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးပါနိုင်ပါလားလို့စဉ်းစားမိရင်း………။ Kyaw Win Tun Unicode ” အလှူ ညတရားပှဲမှာ ကလေးလေးတှေ ဘုနျးကွီးကားနားမှာ တှလေို့ ကားကိုဆော့နကွေတယျအထငျနဲ့ ” သတိပေးဖို့အနားသှားမှာ သှားလိုကျသောအခါ… အလှူမှာ ညတရားပှဲ ဓါတျပုံရိုကျရငျး မဏ်ဍပျရှထှေ့ကျထိုငျနမေိခြိနျလေး …. ကလေးလေးတှေ ဘုနျးကွီးကားနားမှာ တှလေို့ ကြှနျတေျာ့က ကားကိုဆော့နကွေတယျအထငျနဲ့ သတိပေးဖို့အနားသှားမှပဲ ဆော့နကွေတာမဟုတျဘူးဗြ…. […]
Posted in: LIFESTYLEMC KZONE	 February 1, 2020
ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသည်ဟု သံသယရှိထားသော ဝူဟန်မြို့ ဆေးရုံမှ ကိုယ်ဝန်သည် လူနာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့က ဆရာဝန်တွေ အသက်နဲ့ရင်းပြီး အောင်မြင်စွာ ကလေး မီးဖွားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ‘ရှိုယန်’ အမည်ရှိတဲ့ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးဟာ ယခုလအစောပိုင်းကတည်းက ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် သံသယရှိ လူနာအဖြစ်နဲ့ ဆေးရုံတက်နေခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန် ၃၇ ပတ်သားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ သူမရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေက ကိုယ်ဝန်ကြောင့် ပိုဆိုးလာပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့အတွက် သူမကို တစ်ကယ်ထိရောက်တဲ့ ကုသမှုတွေ လုပ်ပေးလို့ မရတာကြောင့် အခြေအနေက ဆိုးရွားလာခဲ့တာပါ။ ကိုယ်ပူရှိန်တွေ အမြင့်ဆုံးရောက်ပြီး တစ်ချိန်လုံး ချောင်းတွေဆိုးကာ ဖျာနာမှုဒဏ်ကို အလူးအလဲခံနေရတဲ့ အမျိုးသမီးကို ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေက သူတို့အသက်နဲ့ ရင်းပြီး ကလေးကို အောင်မြင်စွာ မွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ […]
Posted in: LIFESTYLEMC KZONE	 January 29, 2020
အွန်လိုင်းပေါ်နာမည်ကြီးနေတဲ့ မျက်မမြင်ဇနီးမောင်နှံရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကတော့ လေးစားစရာပါ VIDEO ကြည့်ရန်နှိပ်ပါ အခြားအဆိုတော်တွေရဲ့သီချင်းလည်းဆိုပါတယ်။ ချယ်ရီသင်း သီချင်းနဲ့မှ အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်သွားတာ လို့ဆိုလာတဲ့ မျက်မမြင် အနုပညာသည် ဦးသန့်ဇင် နဲ့ ဒေါ်ရီရီထွန်း ဝမ်းစာအတွက်သီချင်းသီဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးဖို့ တေးရေးဆရာနဲ့ အဆိုတော်တွေကို တောင်းပန်ပါတယ်… အခြားအဆိုတော်တွေရဲ့သီချင်းလည်းဆိုပါတယ်။ ချယ်ရီသင်း သီချင်းနဲ့မှ အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်သွားတာ လို့ဆိုလာတဲ့ မျက်မမြင် အနုပညာသည် ဦးသန့်ဇင် နဲ့ ဒေါ်ရီရီထွန်း ဝမ်းစာအတွက်သီချင်းသီဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးဖို့ တေးရေးဆရာနဲ့ အဆိုတော်တွေကို တောင်းပန်ပါတယ်.. UThantZin DawYeeYeeTun CGCeleGabar Unicode ဖယောငျးတိုငျးလို ကိုတိုငျအလောငျးခံပွီ သားကို ပညာ သငျပေးခဲ့တယျ မကျြမမွငျ မိဘနှဈဦး အှနျလိုငျးပျေါနာမညျကွီးနတေဲ့ မကျြမမွငျဇနီးမောငျနှံရဲ့ စိတျဓါတျကတော့ လေးစားစရာပါ VIDEO ကွညျ့ရနျနှိပျပါ အခွားအဆိုတျောတှရေဲ့သီခငျြးလညျးဆိုပါတယျ။ ခယျြရီသငျး […]
လက်တွေ့ဘဝမှာလည်း သားသမီးအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ မိဘတွေများစွာရှိပါတယ် ။ ငွေကြေးမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ သားသမီးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်စည်းပေးနိုင်ဖို့ အပြင်မှာအလုပ်မျိုးစုံထွက်လုပ်ကြတဲ့မိဘတွေရဲ့ ရင်ထဲကိုထိမိလွန်းတဲ့ အကြောင်းတွေလည်းများစွာ ကြားဖူးကြမှာပါ ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ဆင်းရဲလွန်းတဲ့ဖခင်တစ်ဦးဟာသူ၏သားလေးကို ဖိနပ်ဝယ်ပေးဖို့အတွက်ဆိုပြီး ဖိနပ်ဆိုင်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထုတ်ပြီးငွေရှင်းရမယ့်အစား နှစ်ပေါင်းများစွာစုဆောင်းထားခဲ့တဲ့အကြွေစေ့တွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့တဲ့ သေတ္တာလေးကိုထုတ်လာပါတယ် ။ ပိုက်ဆံရှင်းမည့် ကောင်တာမှာရှိနေတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ နှင့် သားဖြစ်သူတို့၏ ဓာတ်ပုံများစွာကို Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ် ။ ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ သူ၏သေတ္တာထဲမှ အကြွေးစေ့လေးများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်ယူကာ ရေတွက်နေခဲ့ပြီး သားဖြစ်သူအတွက်ဖိနပ်တစ်စုံဝယ်ပေးဖို့ ပိုက်ဆံလုံလောက်သွားပြီဆိုတာကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ သူ၏မျက်နှာလေးဟာ ဝမ်သာပီတိဖြစ်သွားပြီး အားရပါးရပြုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ် ။ သားအဖ နှစ်ဦး၏ဓာတ်ပုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတဲ့ လူအများစုကလည်း ဖခင်ဖြစ်သူ၏သားသမီးဖြစ်သူအပေါ်ထားရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကြောင့် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်သွားကြကာ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးခဲ့တဲ့ Comment တွေအများအပြား ရေးသားခဲ့ကြပါတယ် ။ ထို့အပြင် အခြားသူများမှာလည်း […]
Posted in: LIFESTYLEMC KZONE	 January 25, 2020
တနေ့က ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စည်းကမ်းမဲ့ ဈေးသည်အဘ နဲ့ စည်ပင် အကြောင်း မနေ့ညက အဲ့ဒီအဘပိုစ့်လေးကိုတွေ့တာ ကြောင့် ကျွန်တော်အသည်းအသန်အဘကို လိုက်ရှာခဲ့ပါတယ် ည 12 နာရီမှာ အဘ နေတဲ့လိပ်စာရခဲ့ပါတယ် မနက်ကျွန်တော်အဘအိမ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ် အဘနဲ့တော့မတွေ့ခဲ့ဘူး အဘ ရဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ သမီးငယ်တို့နဲ့တွေ့ခဲ့ရပါတယ် အဘရဲ့အကြောင်းမေးကြည့်တော့ အဘနာမည်က ဦးသိန်းထွန်း အသက်က 70 ပါ သားသမီး လေးယောက်ရှိပါတယိ အဘ အမျိုးသမီးက အသက် 60 ပါ သမီးအကြီးဆုံးနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာ ဈေးတူတူရောင်းပါတယ် သမီးငယ်လေးက မသန်စွမ်းလေးပါ အဘက တနေ့လုပ်မှ သူအိမ်အတွက် အဆင်ပြေတာမို့ သမီးအကြီးနဲ့အတူ မနက် 7:00 ထဲက ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာ ဈေးလှည့်ရောင်းပါတယ် ညဘက် အိမ်ကို ပြန်ရောက်ချိန်က […]
Posted in: LIFESTYLEMC KZONE	 January 21, 2020
ရေးတတ်သလို ရေးထားခဲ့တဲ့ သူ့စာမှာ ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေအပေါ် အကောင်းမြင်စိတ်တွေတွေ့ရမယ်..ကုန်းကောက်စရာမရှိလောက်အောင် ဆင်းရဲတဲ့ သူ့ရဲ့ ဘဝအခြေအနေကိုပါ မြင်ရမယ်.. ဒါဟာ သူတစ်ယောက်တည်းရဲ့ ဘဝအခြေအနေဆိုတာထက် ရခိုင်အများစုရဲ့ အခြေအနေကိုပါ ဖော်ပြနေသလိုလို.. ဒီစာရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အရှည်ကြည့်ရင် ကြည့်သလောက် တွေးစရာတွေတော့ အများကြီးပါပဲ… ခုလောလောဆယ်တော့ စာကို သိမ်းထားရုံပဲ တတ်နိုင်တော့တယ်.. ( ခလုတ်တိုက်တယ် ရေးတာကို ဖားပြုတ်ကိုက်တယ်.. တရုတ်ရိုက်တယ် ထင်နေသူတွေ အတွက် edit… Fb မှာ အလုပ်ကိစ္စတွေ ၊ စိတ်ညစ်ညူးစရာတွေ ၊ အဖြေရှာရခက်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ရေးခဲ ပြောခဲပါတယ်.. မနေ့က တင်လိုက်တဲ့ လူနာတစ်ယောက်ရဲ့စာဟာ သိမ်းထားတာ နှစ်ဝက်မက ကြာပါပြီ.. မနေ့က စစ်တွေကို ရောက်တုန်း ဘော်ဒါတစ်ယောက်ကို အဲဒီစာကိုပြဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲမွဲတေမှုအကြောင်းကို […]
ကလေးငယ်တွေတိုင်းကတော့ ကျောင်းကနေအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာရင် ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးရပြီး ပျော်ချင် ၊ ဆော့ကစားချင်ကြတာ သဘာဝပါပဲလေ ။ သို့ပေမဲ့လည်း တစ်ချို့ကလေးငယ်တွေကတော့ ဆော့ကစားဖို့မပြောနဲ့ အခြားသောကလေးငယ်တွေလိုစာသင်ခွင့်မရဘဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ငွေရှာနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေလည်း အတော်များများရှိပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြမဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံက ကလေးငယ်ဟာလည်း အသက် 11နှစ်အရွယ်သာရှိသေးပြီး7Eleven စတိုးဆိုင်ရှေ့မှာ အိပ်စက်နေခဲ့တဲ့အတွက် မေးမြန်းကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ အိမ်ရှိပေမဲ့လည်း ဖခင်ဖြစ်သူပေးထားတဲ့ရေမွှေးတွေအကုန်မရောင်းနိုင်လျှင် အရိုက်ခံရသောကြောင့် အိမ်မပြန်ရဲကြောင်း ကလေးငယ်ကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ် ။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ Mohd Najab အမည်ရှိတဲ့အမျိုးသားဟာ အဆိုပါစတိုးဆိုင်မှာပစ္စည်အရှိဝယ်ဖို့လာရင်းနဲ့ စတိုးဆိုင်အပြင်ဖက် ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အိပ်စက်နေခဲ့တဲ့ကလေးငယ်ကို တွေ့ရှိခဲ့တာပါ ။ ဆိုင်ထဲက ဝန်ထမ်းတွေကလည်း ကလေးငယ်မှာ တစ်နေကုန်ရေမွှေးရောင်းရတာ ပင်ပန်းလွန်းသောကြောင့် အဆိုပါနေရာတွင် ညတိုင်းလိုလိုလာရောက်အိပ်စက်လေ့ရှိကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ ကလေးငယ်မှာ အိပ်စက်နေပေမဲ့လည်း မိုးရွာပြီးမကြာသေး၍ ကြမ်းပြင်မှာအတော်လေး […]
Posted in: LIFESTYLEMC KZONE	 January 20, 2020
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့အသက် 50 အရွယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းနေတဲ့အမျိုးသားဟာ သူ့ကိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးပြုစုစောင့်ရှောက်လာခဲ့တဲ့ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့နေတဲ့မိခင်ပြီး ပြန်လည်ပြီးပြုစုစောင့်ရှောက်နေလျက်ရှိပါတယ် ။ အဆိုပါ အသက် 90 အရွယ်မိခင်မှာတော့ သားသမီး 5ယောက်ရှိပြီး နှစ်ယောက်မှာဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ကျန်နှစ်ယောက်မှာတော့ အိမ်ထောင်သည်များဖြစ်၍သီးသန့်ခွဲနေလျက်ရှိကာ ယခုအငယ်ဆုံးမှာတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းနေတဲ့သားကိုတော့ သူမတစ်ဘဝလုံးပြုစုစောင့်ရှောက်နေခဲ့တာပါ ။ အငယ်ဆုံးသားမှာ သူမကိုအမြဲမှီခိုနေရလျက်ရှိပြီး မိခင်ရဲ့အုပ်ထိန်မှုနဲ့ပဲ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ။ ယခုချိန်မှာတော့ မိခင်ဟာ အသက်အရွယ်အတော်လေးကြီးလာခဲ့လို့ သားလေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မပြောနဲ့ သူမကိုယ်သူမတောင် ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ပါဘူး ။ ဆေးကုသမှုအတွက် လုံလောက်တဲ့ငွေကြေးမရှိလို့ မိခင်ဖြစ်သူကတော့ အိပ်ရာထဲမှာအမြဲနေလေ့ရှိပြီး ” အိပ်စက်ခြင်းကသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း ” ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။ မိခင်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းနေတဲ့သားဟာ မိခင်ဖြစ်သူကိုပြန်ပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်ရမှာ သူ့ရဲ့တာဝန်ဆိုပြီး သိမြင်လာခဲ့ပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့လည်း သူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကြောင့် အလုပ်ရှာမရခဲ့ပါဘူး ။ ထို့အပြင် […]